နေ့သည်ကောင်းသော! မနေ့ကငါအိုင်ပီ-ကင်မရာ Vimtag snowman ကြိုးမဲ့ PTZ တိမ်တိုက် IP ကိုကင်မရာ CP1 ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီနေ့သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးကို USB မှ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်မှကင်မရာကိုချိတ်ဆက်ရမည်ကိုပြောပါတယ်ဘယ်မှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအရာအားလုံး, တူ, လုပ်၎င်း၏ installed စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်ကို Wi-Fi, USB အဖို့ကချိတ်ဆက်။ ဒါဟာအဆင်ပြေမယ့်ကင်မရာကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်, ကီလိုမီတာ၏စုံတွဲတစ်တွဲထံသို့ ဝင်. , အရာအားလုံးကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးအပေါ် hard drive ကို Check
မင်္ဂလာပါ တစ်နည်းနည်းနဲ့ PC အတှကျ hard drive ကိုစစ်ဆေးမယ်လို့သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလာကြအဆိုးဆုံးအလုပ်ကြီးနှင့်အားရစရာသကဲ့သို့ငါမသိရပါဘူး။ မှတ်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကအများကြီး, ကြည့်ရှုလျက်, ငါကဒီမှာသင့် hard drive ကို (500 GB ကို HDD) အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များသို့ရောက်ကြ၏။ ဒါဟာမကောင်းတဲ့င် - ငါလျှင်အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်လုပ်ကွက်တွေအများကြီးကိုငါသိ၏။0င်အနီနဲ့ 1 အပြာ, 1 အပြာရှိသမျှတို့, သင်တို့မူကားငါ့ကိုအဘယ်အရာကိုကူညီပေးခဲ့မယ်လို့ကျွန်မမည်မျှ "ပုံမှန်" ဟုအဆိုပါ hard drive ကိုအဘို့နှင့်မည်မျှ "မပုံမှန်" (hard disk ကို 5-6 နှစ်) မသိရပါဘူးငါချင်ပါတယ်ငါနှင့် ခက်ခဲများစွာကို "ပုံမှန်" အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်ကျိုးကဏ္ဍများသတိပေးခံရ, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ကြာကြာ "ပုံမှန်" ကသင့်ရဲ့ hard disk ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်းစားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာရွေ့အမှားမှာ Windows Defender
ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ Windows 10 ကိုပြဿနာတွင်။ နောက်ခံလူမကူညီဘူးဖြတ်လေ၏။ သင် installer ကို run တဲ့အခါမှာ "သင်၏အဖွဲ့အစည်း quarterback windose မှာလျှောက်လွှာထိန်းချုပ်မှု function ကိုသုံးပြီး application တစ်ခုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်" ဟုနိမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာမှာပါ။ ဂုဏ်ပြုအကွံဉာဏျ, လုံခြုံရေး Boot တက်ကို disable လုပ်ဖို့, BIOS ထဲမှာအကြံပြုပါသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီ option ကိုဆိုလိုသည်မှာက boot tab ကို, သင် tab ကို sekuriti set ကို parameter သည် F12 အတွက်စကားဝှက်ကိုမသတ်မှတ်နိုင်မယ့်စာရင်းထဲမှာ ustroistva ဦးစားပေးထဲမှာပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါ ....
အဆိုပါ SSD ကို Samsung က 860 EVO အတူပြဿနာ
မင်္ဂလာပါ ငါတောင်ထုတ်လုပ်သူငါ SSD ကို EVO 860 256 GB ဝယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမကူညီနိုင်, အရာအားလုံးအစာရှောင်ရာသင်္ဘောကဲ့သို့ဿုံအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကအဲဒီမှာနေတုန်းပဲကြောင်းကိုဤကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုရှိသည်။ Samsung က SSD ကို Magician5ယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကိုတိုနှင့်အတူအဆိုပါအစီအစဉ်လုပ်ဆောင်နေသည်ကောင်းစွာကျွန်မကို PC ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။
နေ့သည်ကောင်းသော။ Windows နဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြေရှင်းသောအခါ, "Run ကို" (ဒီမီနူးနှင့်ဝသကဲ့သို့, သင်အမြင်ကွယ်ပျောက်လျက်ရှိသောအစီအစဉ်များကို run နိုင်ပါတယ်) ရက်နေ့တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော command များကို execute ရန်အလွန်မကြာခဏလိုအပ်ပေသည်။ ပရိုဂရမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သို့သော်, စည်းကမ်းအဖြစ်, ကြာကြာဖြစ်ပါသည်, ကို Windows Control Panel ထဲကကနေ run ပေမယ့်နိုင်ပါသည်။
က ISO ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များဘာတွေလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော! သာကွန်ယက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောလူကြိုက်အများဆုံး disk ကိုပုံရိပ်များတစ်ခုမှာ, ခြောအဲဒီ ISO format နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုတွေ့ချင်ပါတယ် ... တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လက်တဆုပ်စာ - အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီ format နဲ့ထောကျပံ့သောအစီအစဉ်များကိုအများကြီးအဖြစ် disk သို့ image ကိုမီးရှို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကဖန်တီးအပြင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ဟန်ဖြစ်ပါတယ် ပုံရိပ်တွေ (ငါ၏အပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်အတွက်သင်တန်း) က ISO ။
ပုံတစ်ပုံက ISO, MDF / MDS, NRG နေ disc ကိုမီးရှို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီတခါတရံစသည်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းအစီအစဉ်များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူက ISO images နဲ့အခြားသူတွေကို download လုပ်ပါတစ်ခါတလေသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြုပါ, တခါတရံအမှန်တကယ်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် - .. CD ကိုသို့မဟုတ် DVD ကို drive တခုဖြစ်တယ်။ ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, ပုံရိပ်တစ်ခုကနေ disc ကိုမီးရှို့ခြင်း, သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံ play တာပေါ့သည့်အခါလိုအပ်ပါနှင့်ပြင်ပမီဒီယာ CD / DVD ကိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက် (ရုတ်တရက်သတင်းအချက်အလက်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနှင့် operating system ကိုပျက်ကျလုယူပါလိမ့်မယ်), နှင့်သင်က Windows ကို install ဖို့ disk ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ကြိုဆိုပါတယ်! အခုတော့မကွန်ပျူတာမရှိတော့အဲဒီမှာနှင့်မဤနေရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးထွားလာသည် - နှင့်ဤကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၏တန်ဖိုးဆိုလိုသည်။ ဤစွပ်စွဲခံရနိုင်ပြီး, ကီးဘုတ်မှာရှာနေစရာမလိုဘဲနှစ်ဦးစလုံးတို့သည်လက်မြန်ဆန်ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းအဖြစ်အသုံးဝင်သောကျွမ်းကျင်မှု။ ဒါပေမယ့်အလွန်ကိုမှန်ကန် - ထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒါရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လို Excel ထဲမှာဖော်မြူလာကိုဖန်တီးရန်။ vesch.imuschestvu အပေါ်ထုတ်ပယ်ကာလ၌အခြေအနေက။ ဥပမာအားစစ်သားက 3years တစ်ဦးကိုဆောင်းတွင်းဂျာကင်အင်္ကျီ 1pc ထုတ်ပြန်ရမယ်, နှင့်အမိန့်ကိုအရေအတွက်အားဖြင့် 148 07.2008g အမိန့်အရေအတွက်က 578 အောက်မှာ,4နှစ်ကြာ 1pc ထုတ်ပေးရပါမယ် 29.12.1997 ကနေ 916 № 01.04.1997goda အလုပ်အပေါ်မွေးစားခြင်းနှင့်အမိန့်အရ 31.07.2017g နုတ်ထွက်ခဲ့သည် 14 ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့အထိ, ကွန်ယက်ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေလျှင်, တခါတရံတွင်သင်သည်ဥပမာအရွယ်အစားလျှော့ချဖို့သူတို့ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခါမည်သို့အကောင်းဆုံးသုံးစွဲဖို့ထို့ကြောင့်, ... မာတိကာ 1 စားပွဲတင်ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကျနော်တို့မသာပုံရိပ်တွေ၏ပြောင်းလဲခြင်းဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းလူကြိုက်များကို formats အာရုံစိုက်ပါ။
လက်ပ်တော့အပေါ် touchpad ကိုကို disable
နေ့သည်ကောင်းသော! touchpad - ။ အဆိုပါ touchpad ကို၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်ဦးလက်ချောင်းများ၏ထိတွေ့မှုမှတုံ့ပြန်အထူးသထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Laptop, netbook များကြောင့်ခရီးဆောင် device များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအာရုံခံကိရိယာက။ တစ်ဦးကိုအစားထိုး (အခြားရွေးချယ်စရာ) သာမန်ကြွက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မဆိုခေတ်မီ Laptop ကိုတစ်ဦး touchpad ကိုတပ်ဆင်ထားပေမယ့်ကအဘယ်ကြောင့် ... အ touchpad ကိုကို disable ကို disable လုပ်ဖို့က၎င်း၏မလွယ်ကူပါဘူးဆိုလက်တော့ပေါ်ထွက်လှည့်ပုံကိုဖွင့်သလဲ?
ကွန်ပျူတာများ၏ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ပို. ပို. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာလှမျးမိုးပြံ့နှံ့။ အတော်များများကဒေသများတစ်ဦးကို PC များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲရိုးရိုးကူးဖြစ်ပါသည်: ရှုပ်ထွေးသင်္ချာတွက်ချက်မှု, ဒီဇိုင်း, မော်ဒယ်, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်, etc နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကပုံဆွဲမှတက်လာ၏။ ! အခုတော့အနုပညာရှင်တွေ, ဒါပေမယ့်လည်းရိုးရှင်းတဲ့ချစ်သူများသာအလွယ်တကူအထူးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့အခြို့သော "လက်ရာ" ဆွဲရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ အလွန်မကြာခဏယာဉ်မောင်းကို update သို့မဟုတ်မည်သည့်လျှောက်လွှာကို install မတိုင်မီအများအပြားညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူကွန်ပြူတာ Windows အတွက် backup တစ်ခုမိတ္တူစေရန်အကြံပြုသည်။ ကျွန်မမကြာခဏငါ့ကိုပေး, တူညီတဲ့အကြံပြုချက်များကြောင်းဝန်ခံ ... ယေဘုယျအားဖြင့်, Window built-in ဖြစ်ပါတယ်နာလန်ထူအင်္ဂါရပ် (သင်ပိတ်ထားကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်, သင်တန်း၏) ရပါမည်, ဒါပေမယ့် super-ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အဆင်ပြေပါကဖုန်းခေါ် - ငါအလိုမရှိ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ သစ်တစ်ခုဂရပ်ဖစ်ကဒ် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်) ဝယ်ယူသည့်အခါ - (စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်မှာဗီဒီယိုကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန်) လို့ခေါ်စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ပိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ (သင်မကျွမ်းတဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးလက်ကိုယူအထူးသဖြင့်လျှင်) လည်းဖယ်ရှားပစ်ရအသုံးဝင်သည်ကို၎င်း, "အဟောင်း" ဗီဒီယိုကဒ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကဒ်၏စွမ်းဆောင်မှုတွင်ဂိမ်း (အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ) ၏လိုင်းအမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်ပါသည်။ စကားမစပ်, တစ်ချိန်တည်းမှာဂိမ်း, တစ်ဖွဲ့လုံးကကွန်ပျူတာကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များအကြား (အတူတူပင် spec ၌တည်၏။ စမ်းသပ်အစီအစဉ်များသည်မကြာခဏတိုင်းတာသောအချို့ "အပိုငျးပိုငျး" ဂိမ်းနှင့်ဒုတိယနှုန်းဘောင်၏နံပါတ်အသုံးပြုကြသည်) နေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Windows10 မစတင်
ချစ်ခင်ရပါသော Andrey Ponomarev! ငါ၏အရှည်လျား-ခံစားနေရပြီး Laptop ကို Samsung ကသေမင်း၏သုံးအချိန်အပြာရောင် screen ကိုခံခြင်း, Windows 10 ကို reinstall ပေမယ့်အပြစ်အနာအဆာယခင်ကထိန်းသိမ်းထားပျေါထှနျးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်: တစ်က start ဘို့သူ့ကိုငါလမ်းကိုပြသနိုင်ဖို့ရှိသည်, ညာဘက်သည့်အခါတုန်ခါမှုတွေရံဖန်ရံခါ-4 မျက်နှာပြင်ခြေလှမ်းများ, မျဉ်း P1 TSSTcorp CDDUDW SN လှဲ Exit ကို-5 ခြေလှမ်းများ F2 နှိပ်ထားတဲ့အဘို့ 208BB-ရိုက်ထည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏အသက်အရွယ်နှင့်ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ, ဒီမှာသွားနှင့်မပါဘူး, သငျသညျသူ့ကို bezvylazno များအတွက်နေတုန်းပဲထိုင်လို့မရပါဘူး - ဒီ XXI ရာစုဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း။ အဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးကို PC ဒါမှမဟုတ်တီဗီများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုနာရီတစ်ရက်ထိုင်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုနားလည်သူတို့ကဒါပေါ်မှာသိပ္ပံနှင့်နေဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။
Windows အတွက်ကို Android emulator (အဖွင့်ပွဲဂိမ်းနှင့်အန်းဒရွိုက်ဆော့ဖ်ဝဲကို)
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အိမ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android app များ run ဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူတို့အားအသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း loading မတိုင်ခင်လျှောက်လွှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ချင်လျှင်, ကောင်းစွာ, ဒါမှမဟုတ်ပဲမဆိုဂိမ်းကစားချင်တယ်, ပြီးတော့ဒီက Android emulator မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါပါ! ဤဆောင်းပါးသည် Windows နှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူအများစုအတွက်ပေါ်ထွန်းသည်ဟုပုံမှန်မေးခွန်းများကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး emulator ... မာတိကာ 1 ဇယား၏လုပျငနျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
မင်္ဂလာပါ တစ်ဦးအဖြစ်မှန်ယနေ့ - မကြာသေးမီနှစ်များတွင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာမနေ့ကတစ်နတ်သမီးပုံပြင်များကဲ့သို့သလိုပဲအဘယ်အရာကိုနိုင်အောင်လျှင်မြန်စွာပါ! ယနေ့ငါပင်ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ, သင်ပြီးသား, ဝဘ်စာမျက်နှာများကို browse နိုင်ပါတယ် youtube ကဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနှင့်သင်၏ TV ပေါ်မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားသောအမှုတို့ကိုပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုဤဆိုသညျကား,
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးတောက်ပ, မျက်စိ-ဖမ်းဒီဇိုင်း, စနစ်တကျစာသား, ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ animations တွေကို, အသံနှင့်ဗီဒီယိုပေါင်းစပ်အသစ်မာလ်တီမီဒီယာကို formats ၏ဖန်တီးမှုလိုအပ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ဒီပြဿနာတွေကို PPT ၏ပုံစံအားဖြင့်ဖြေရှင်းပြီ။ သူ့ကိုကိုအစားထိုးပေးဖို့က MS 2007 ခုနှစ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်နေဆဲတင်ပြချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်အရာထက်ပိုအလုပ်လုပ်တဲ့ PPTX, ရောက်တော်မူ၏။